အဆိုပါ WEBMONEY ပိုက်ဆံအိတ်ထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - WEBMONEY - 2019
WebMoney - ရှုပ်ထွေးပြီးအနုစိတ်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် WebMoney မှအပေါ် log ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး။ သင်စနစ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်လျှင်, မေးခှနျးကို ပို. ပင်မရေနှင့်မရှင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
ကျွန်တော်တို့ကို system ကို WebMoney တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဆန္ဒရှိဖို့သုံးလက်ရှိရရှိနိုင် entry ကိုလမ်းကိုစဉ်းစားကြပါစို့။
အဆိုပါ WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်ထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
ယနေ့အထိ, သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုး, သင်ဂိုးသမားကိုသုံးနိုင်သည်။ မိုဘိုင်း (စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet များပေါ်တွင် install), standart (ကပုံမှန်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်) နှင့်လိုလားသူ (အခြားမည်သည့်အစီအစဉ်သည်ကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာထဲမှာ install) - သာသုံးဗားရှင်းရှိပါတယ်။
Method ကို 1: WebMoney ဂိုးသမားမိုဘိုင်း
ပထမဦးစွာ (သင့် operating system ကို၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ) သင့်လျော်သော button ကို click, ဆော့ဖ်ဝဲကို download စာမျက်နှာကိုသွားပါ။ Android အတွက် - က Windows Phone များအတွက် App Store မှာ - - BlackBerry ကိုများအတွက်က Windows Phone Store မှာ - BlackBerry ကို App ကိုကမ္ဘာ့ဖလား Google က iOS အတွက်, Play ။ သင်တို့သည်လည်းသင် "WebMoney ဂိုးသမား" ကိုရှာခြင်းနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပါ, သင့်ရဲ့ဖုန်း / Tablet ကိုအပေါ် app store ကိုမှသွားနိုင်ပါတယ်။
သင်ပထမဦးဆုံး start တဲ့အခါမှာစနစ်စကားဝှက်တစ်ခုနှင့်အတူတက် လာ. ထို (သင့်ရဲ့ login, စကားဝှက်နှင့် SMS ၏ code ကိုရိုက်ထည့်ပါ) စနစ်ကို log in လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အနာဂတျမှာ, သင်ရိုက်ထည့်မှည့်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Method ကို 2: WebMoney ဂိုးသမား Standart
WebMoney ဂိုးသမား၏ဤဗားရှင်းအတွက် login page ကိုသွားပါ။ "ခလုတ်ကိုနှိပ်entry ကို".
image ကိုမှသင်၏အသုံးပြုသူအမည် (ဖုန်း, e-mail,), စကားဝှက်, နှင့်အရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါ။ "ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါentry ကို".
ထို့နောက်တစ်ဦးသမားရိုးကျ SMS ကိုစကားဝှက်ကိုအတူဤလျှောက်လွှာများ၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်လျှင်, ချိတ်ဆက် E-NUM လျှင်, လျှင်မ - လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, ခလုတ်ကိုကုဒ်တောင်းဆိုချက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအခါအစီအစဉ်ကို browser တွင်တိုက်ရိုက်စတင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏အများဆုံးအဆင်ပြေယနေ့အထိဗားရှင်း - ဒါဟာ WebMoney ဂိုးသမား Standart ကပြောသည်နေပါသည်!
Method ကို 3: WebMoney ဂိုးသမား Pro ကို
Program ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။ သင်ပထမဦးဆုံး start အခါသင်၏ e-mail, ရိုက်ထည့်ပါ။ အဓိကသိုလှောင်မှုနေရာအဖြစ်, E-NUM သိုလှောင်မှုကိုသတ်မှတ်။ "ခလုတ်ကိုနှိပ်နောက်ထပ်".
ဝန်ဆောင်မှု, E-NUM များအတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကက်ဘိနက် E-NUM အတွက်တုန့်ပြန်နံပါတ်ရလာပေးပါ။ "ဟုအဆိုပါ WebMoney ဂိုးသမားပြတင်းပေါက်ထဲမှာ Enter ကိုနှိပ်ပါနောက်ထပ်".
WebMoney ဂိုးသမား၏ဗားရှင်းမဆိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုသစ်ကိုအကောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်, ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်စနစ်သို့ log နိုင်ပါတယ်။
https://termotools.com my.termotools.com © Webmoney 2019